(UNHCR )ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး မစ္စတာသော Filippo ရခိုင်ပြည်နယ်သို့. ထွက်​ခွာ | Danya Wadi
»သတင်းများ»(UNHCR )ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး မစ္စတာသော Filippo ရခိုင်ပြည်နယ်သို့. ထွက်​ခွာ
(UNHCR )ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး မစ္စတာသော Filippo ရခိုင်ပြည်နယ်သို့. ထွက်​ခွာ
(UNHCR )ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး မစ္စတာသော Filippo ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ဇူလိုင်လ၂ ရက်နေတွင်ရောက်ရှိလာပြီးယနေ့ နံနက် ၈ နာရီတွင် UN Speed Boat များဖြင် ဘူသီးတောင်သို့ ထွက်ခွါလာပြီး မောင်တောသို့ ၁၀ နာရီ ဝန်းကျင်တွင် ရောင်ရှိကာ ခရိုင်အထွေထွေရုံးတွင် နေလည် ၁ နာရီ၃၀ ၌ အစည်းအဝေးပြုလုပ်သွားပြီး ဇူလိုင် ၄ ရက်နေတွင် ကျီးကန်းပြင် ကြက်ရိုးပြင် ငါစကြူး စသည့် IDP နေရာ များ သို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။
← မြန်မာလုံခြုံရေးအကြံပေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အရာရှိတွေနဲ့ဆွေးနွေး
ရိုဟင်ဂျာများ ပြန်ပို့ရေး ဆွေးနွေးမှုမှာ အရေးကြီး ကြောင်း နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး အကြံပေး ဦးသောင်းထွန်း ပြောကြား →